Uncategorized – Think Before You TRUST
writing link https://thinkbeforeyoutrust.com/2020/04/12/myogyi-false/
တကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူအများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေချိန်မှာပဲ သတင်းတုတွေက အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်လည်း “ကိုဗစ် ဖြစ်တဲ့ ကလေးသေသွားပါပြီ” ဆိုတဲ့ စာအညွှန်းနဲ့ ကလေးငယ် တစ်ဦးရဲ့ နားရေးဓါတ်ပုံတွေကို ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ ဒီသတင်းတုကို ဘယ်ပါတီကို ရွေးကြမလဲ ဆိုတဲ့ Page တစ်ခုကနေ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၂နာရီ ၂၀မိနစ်က တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တွေးပြီးမှယုံ ကနေ တွေ့ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့ ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၇၀၈ ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာလွန်ဂန္တဝင်ကြီးများ ဆိုတဲ့ အကောင်ကနေလည်း ၂၉ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ တင်ထားခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၃၄၀ ဦးရှိနေပါတယ်။ တွေးပြီးမှယုံ ကနေ စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရာမှာ သတင်းတုဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဩဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့ […]
အသုံးပြုသူတွေအပျော်သဘောနဲ့ ဆော့ကစားလေ့ရှိတဲ့ Tik Tok ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ အမုန်းတရားတွေ၊အမုန်းစကားတွေ ဖြန့်ဖြူးရာ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ….. ဒီနေ့အတွက် Fake News Alert ကတော့…… “ထမီချွတ်ပြီးကတဲ့ ရန်ကုန် အရှေ့တိုင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပါ။ ဒီသတင်းအတုကို တွေးပြီးမှယုံက သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ Like-819 နဲ့ Share-141 ရှိနေပါပြီ။ ဒီသတင်းတုကို စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက Youtube မှာတင်ထားခဲ့ပြီးသား ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်မျိုးနဲ့ ရေးသားထားပြီး Comment တွေမှာဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်တည်မှုကို တိုက်ခိုက်ရေးသားထားတာမျိုးတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ တွေးပြီးမှယုံရဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ…….. သတင်းတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့ခါ အတုအစစ် ဆန်းစစ်ပြီး ကိုယ့်ကြောင့် သတင်းတုတွေမပျံ့နှံ့ဖို့ သတိထားရမယ့်အပြင် သတင်းတုတွေကို အခြေခံပြီး Comment တွေမှာ တခြားသူတွေကို မထိခိုက်မိစေဖို့ကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အမြန်လမ်း ၁၆၅ မိုင် ဆွာချောင်းတံတား ကျိုးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမှားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေထွက်ရှိနေတဲ့အပေါ် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ဖေ့ဘွတ်ပေ့ချ်ကနေ တင်ထားတာကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ေလ်ာက္. ခရီးသြားလာေနသည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္. အျမန္လမ္းမတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ နွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို. သိရိွေစရန္. အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးရုံးမွ အခ်ိန္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ အသိေပးလ်က္ရိွပါသည္ သို ့ရာတြင္. ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္ ့စိတ္အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္. လူ ပုဂၢိုလ္တစ္ခ်ိဳ ့မွ. သတင္း အမွားမ်ားလုပ္ႀကံ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွရာ. ယေန့ဇူလိုင္လ(၂၆) ရက္ ညေန တြင္ လူမွဳကြန္ယက္ ၌ ဆြာေခ်ာင္းတံတား ၁၆၅ မိုင္ က်ိဳးေၾကာင္း. ေဖာ္ျပလ်က္ရိွပါသည္ အဆိုပါ […]
သူငယ်ချင်းတို့ရေ….. ဒီတစ်ခါ တွေးပြီးမှယုံက မျှဝေချင်တာက ခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောသူပြော များနေတဲ့သတင်းကိစ္စပါ။ တရားခံ အဖြစ် သံသယရှိသူ ကားမောင်းသမားရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ဆိုပြီးတော့ ပျံ့နှံ့လာတဲ့သတင်းနဲ့ အတူတူ အောင်ကြီးရဲ့ ပုံတွေလဲ ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပုံက အမှန်တကယ် အောင်ကြီးရဲ့ ပုံမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူက စတင်ပြီး ဂျင်းထည့်လိုက်သလဲ မသိပါဘူး။ သတင်းလင့်တွေကတော့ တော်တော်လေး ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။ သတင်းပုံကို ကားမောင်းသမားဆိုတိုင်း ကားမောင်းတဲ့ပုံကို ယူသုံးထားတာပါ။ ဒါဟာ ပုံယူသုံးတဲ့ Copy Right အပြင် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမှုပါ မြောက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကတော့ တရားပြန်ဆွဲဖို့မရှိသလို ဒီကိစ္စကို အေးဆေးလေးပဲ ဖြတ်ကျော်သွားဖို့ စဉ်းစားထားပုံရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းတွေကို လူပိုစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ထားပြီး ကိုယ့် သတင်း Website, Page […]
AA ARSA Chin DASSK EAO election Facebook KIA live အတု Mindat MPC NLD NUG page အတုများ Personal Data religious tittok troll ကိုယ်ကျိုးရှာ ကောလာဟလ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကျောက်မဲ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စစ်တပ် စီးပွားရေး ဆောင်းပါး တပ်ချုပ် တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသားပါတီ ထိုင်း ဒီမိုကရေစီ ဒီမောဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး ပညာပေး ပုံဟောင်း ပုံအတု ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဗဟုသုတ ဗီဒီယို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘရာဇီး ဘာသာရေး မွတ်ဆလင် ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ ရုရှား ရွေးကောက်ပွဲ လှုံ့ဆော်ခြင်း သတင်းဟောင်း သာဝန် အကောင့်တု အကောင့်တု အင်တာနက် အစိုးရ အစ္စလာမ် အမုန်းစကား အိန္ဒိယ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်း ဦးရည်မွန် ဦးသိန်းစိန်